The downward spiral of government-media relations
Government-media relations are locked inavicious cycle. To break it, the government must stop treating journalists as threats to be managed and instead consider them partners in deepening democracy.
Rape, denial and Tatmadaw ‘chivalry’
ကွဲပြားသည့်ရှုမြင်ပုံများကြားက ကမ္ဘာ့တရားရုံးရောက် မြန်မာ့အရေး
နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ သည်ဟိတ်ဂ်မြို့၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးကြားနာပွဲများကို မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စား ဦးဆောင်နေသည်။ ယင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို အဖတ်ဆယ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ ၎င်း၏ပုံရိပ်ကိုလည်း ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ရာ နိုင်ငံတကာသုံးသပ်သူများနှင့် ပြည်တွင်းရှိ လူထုအကြားတွင် အမြင်အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
BY Lun Min Mang & Andrew Nachemson
Aung San Suu Kyi told to ‘stop the genocide’ in UN court showdown
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi faced calls for Myanmar to "stop the genocide" of Rohingya Muslims as she personally led her country's defence at the UN's top court on Tuesday.
Daw Aung San Suu Kyi at the ICJ: national honour or international disgrace?
BY Andrew Nachemson & Lun Min Mang
Children find sanctuary from conflict in the Sangha
Parents in conflict-torn regions are sending their children to monastic schools in Yangon, where they can be educated in safety but also often lose connection to their homelands.